လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ စင်ကာပူသံရုံးနှင့် မြန်မာအစိုးရပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ (အခမဲ့သင်တန်း) - Tameelay
လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ စင်ကာပူသံရုံးနှင့် မြန်မာအစိုးရပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ (အခမဲ့သင်တန်း)
အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များကို ဖွင့်လှစ်သွားမည် ။
Courses For Hospitality and Tourism
1. Front Office Operations
2. HouseKeeping Operations
3. Restaurant Operations
1. Electronics ( Computer Networking)
2. Electrical Technology (Electrical Installations)
3. Residental Air Conditioning
4. Building Fixtures and Equipments
5. General Welding
6. Mechatronics (Basic Services)
Singapore နိုင်ငံ ITE College အသိအမှတ်ပြုသင်ရိုးများ
အတိုင်း လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်စေရန် ဦးစားပေးသင်ကြားမည်။
သင်တန်းကာလ ၆ လကို အချိန်ပြည့် တက်ေ၇ာက်ရမည် ။
၁၀ တန်းအောင် ပြီး အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်သော
သင်တန်းကြေးပေးရန် မလိုပါ ။
သင်တန်းပြီးဆုံးပါက Singapore Myanmar
(SMVTI Certificate) ပေးအပ်မည်။
Singapore- Myanmar Vocational Training Institute
အမှတ် (၁၂၃) ၊ နတ်မောက်လမ်း ၊ ဗဟန်းမြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊
ဖုန်း – ၀၉-၇၈၁၀၀ ၂၅၇၁ ၊ ၀၉-၇၈၁၀၀၂၅၇၂ ၊ ၀၉-၇၈၁၀၀၂၅၇၃
(ဖုန်းဆက်​​မေးကြည့်​တာ လကုန်​ ​ဖောင်​တင်​ရမယ့်​ ရက်​
သတင်းစာထဲ​ကြေညာပါ့မယ်​တဲ့ ဆယ်​တန်း​အောင်​စာရင်း ​
အောကျဖျောပွပါ ဘာသာရပျမြားကို ဖှငျ့လှဈသှားမညျ ။
Singapore နိုငျငံ ITE College အသိအမှတျပွုသငျရိုးမြား
အတိုငျး လကျတှကြေှ့မျးကငျြစရေနျ ဦးစားပေးသငျကွားမညျ။
သငျတနျးကာလ ၆ လကို အခြိနျပွညျ့ တကျရောကျရမညျ ။
၁၀ တနျးအောငျ ပွီး အသကျ ၁၆ နှဈပွညျ့သော
သငျတနျးကွေးပေးရနျ မလိုပါ ။
သငျတနျးပွီးဆုံးပါက Singapore Myanmar
(SMVTI Certificate) ပေးအပျမညျ။
အမှတျ (၁၂၃) ၊ နတျမောကျလမျး ၊ ဗဟနျးမွို့နယျ ၊ ရနျကုနျမွို့၊
ဖုနျး – ၀၉-၇၈၁၀၀ ၂၅၇၁ ၊ ၀၉-၇၈၁၀၀၂၅၇၂ ၊ ၀၉-၇၈၁၀၀၂၅၇၃
(ဖုနျးဆကျမေးကွညျ့တာ လကုနျ ဖောငျတငျရမယျ့ ရကျ
အကြွေး မြန်မြန်ပြန်ရအောင်၊ ပိုက်ဆံ များသူ့အလိုလို ဝင်လာစေသော အဆောင်
အကြွေး မြန်မြန်ပြန်ရအောင်၊ ပိုက်ဆံ များသူ့အလိုလို ဝင်လာစေသော အဆောင် ဒီ ယတြာလေး နဲ့ အကြွေးမြန်မြန်ပြန်ရအောင်လည်းလုပ်လို့ရသလို၊ ဝင်ငွေ တိုးပွားအောင်းလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဝင်ငွေလည်းသိသိသာသာတိုးပွားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လုပ်ရမယ့် နည်းလေး က လွယ်ပါတယ်။ဘာနေ့ သားသမီး မဆို ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဘေးဥပါဒ် တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါဘူး။ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်နိုင်ရင် ပိုအစွမ်းထက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ …
မ်နမ်မှာ နာမည်ကြီးရုံတင်မက ထိုင်းနဲ့ တရုတ်ရဲ့အင်တာနက်ကွန်ရက်တွေမှာပါ Followers ထောင်ပေါင်းချီကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ Bored Panda နဲ့ အင်တာဗျုးမှာ သခင်ဖြစ်သူ Le Quoc Phong က သူ့ကြောင်လေးဟာ ရေခဲမုန့်ကြိုက်ပြီး ခရီးသွားရတာနဲ့ အိပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့နိုင်ငံမှာ သူ့ကိုအရမ်းချစ်တဲ့ကောင်မလေးတွေနဲ့ ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ …
စကားပုံများဖြင့် ရည်းစားစာ ရေးနည်း
စကားပုံများဖြင့် ရည်းစားစာ ရေးနည်း အချစ်ရယ် ဒီစာကိုရေးလိုက်လို့ ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်တယ်၊ မိကျောင်းမင်းရေခင်းပြတယ်၊ ခရု ခါးတောင်းကျိုက်ဖမ်းတယ်လို့ မထင်စေချင်ဘူးနော်။ ကိုယ့်မှာမင်းကိုချစ်မိမှပဲ ခဲမှန်ဖူးတဲ့စာသူငယ်လိုလို၊ မပိုင်ဝက်မွေးဆိုသလိုလို၊အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်ဆိုသလိုလို ဖြစ်နေပါပြီ။ အခုအချိန်မှာ ၀က်ဖြစ်မှတော့မစင်ကြောက်နေ လို့လည်း မထူးတော့ပါဘူးလေ။မင်းအဖေကို ပြောလိုက်ပါ မြင်းကမလှုပ်ခုံကလှုပ်၊ ယုန်ကမတိုး ပိုက်ကတိုး ဖြစ်မနေပါနဲ့လို့။ယူမှာက …